TelePrompter: Teleprompter matihanina amin'ny Internet | Martech Zone
Amin'ny ankabeazan'ny fotoana itenenako dia tiako ny miteny voajanahary ary manana sary lehibe mandritra ny fampisehoana nataoko. Amin'ity fomba ity dia miseho voajanahary aho ary afaka mifantoka amin'ny fandraisan'ny mpanatrika lahateny fa tsy ireo teny eo amin'ny efijery. Na izany aza, misy fotoana - toy ny amin'ny horonantsary Youtube - izay ananako fotoana voafetra ary mila manoratra script aho.
Ny fametrahana ny teny ao anaty antontan-taratasy iray ary mametaka ny haben'ny endritsoratra mba ho zahana dia fomba iray hanamboarana sandoka manana teleprompter. Mazava ho azy, ny fikororohana sy ny fitazonana ny toeranao dia ny fanaintainana amin'ny vody. Roa taona lasa izay, nizara fitaovana iray izahay ProPrompter Desktop, izay ahafahanao mibanjina mivantana ny fakan-tsarinao amin'ny Internet mandritra ny fandraisam-peo.
Raha manolotra ny fampiharana teleprompter azy manokana i ProPrompter, misy safidy hafa azo alaina an-tserasera izao. Teleprompter dia manana lozisialy ho fampiharana serivisy an-tserasera ahafahanao mampakatra ny script (na script ho an'ny olona marobe), mampiditra fiatoana ara-potoana, ary mametraka sary mihitsy aza. Azonao atao maimaim-poana izany rehetra izany, na mitazona ny scripto ho anisan'ny famandrihana.
TelePromptor dia mampianatra anao ny fomba fitenenana toy ny matihanina, amin'ny fampiasana teknolojia miandry ny patanty izay ampandehanin'i over kabary iray alina. Amin'ny fampiasana ny teknikan'ny faharetan'ny phonetic eo ho eo, afaka mandre toa ny mahatsara ianao ianao! Tafiditra ao anaty rahona, TelePromptor dia fampiharana teleprompting matihanina miaraka amina fampiasa mpampiasa madio sy injeniera mikendry izay mila mamaky script amin'ny fakantsary.
Ny efijery fanovana dia manazava ny tenany, manome ny fahaizana manampy sary, mametraka mpandahateny ary manitsy fiatoana.
Ao anatin'ny efijery filalaovana, azonao atao ny miditra amin'ny script-nao ary koa ny fandaharam-potoana amin'ny ankapobeny. Manerana an-tampony dia bara fandrosoana ho an'ny script-nao miaraka amina fiatoana namboarina mazava tsara miaraka amin'ny B. Ny isa sy ny loko mifandraika dia natao handrindrana ireo mpandahateny samihafa. Ampidiro fotsiny ny scripto, apetraho ny fotoana fiatoanao raha miaina na miato ianao, dia lasa ianao!
Satria ny teleprompter dia mamaly sy milalao ao anaty tranokala, azo lalaovina amin'ny fomba fampisehoana feno amin'ny fitaovana rehetra - birao, tablety na finday.
Tags: Konferansa fivarotana an-tseraserateleprompter amin'ny Internetteleprompter kabarykabaryteleprompterappprompter apptelepromptingfampiharana teleprompting
Mailflow: Ampio Autoresponders ary ampandehano ny lisitry ny mailaka
Asa 12 isaky ny herinandro fiasan'ny Marketer sosialy